कोरोनासंग जुधिरहेको चीनले गरिदियो फेरी अहिलेसम्मकै यस्तो ठुलो घोषणा, विश्वभर खुसियाली — Sanchar Kendra
१‘राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन अबको विकल्प’
२अब हिमाल डेन्टल हस्पिटलको शाखा साँखुमा पनि, २४ सैं घण्टा गुणस्तरीय मुख तथा दन्त सेवा
३यी हुन् मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी हुनेवाली ‍दुलही, नाम र तस्विरसहित
४दाङ पुगेर माधव नेपालले गरे प्रचण्डकाे प्रशंसा
५केपी ओलीको नाम खड्गप्रसाद ओली होइन, कीर्तेप्रसाद ओली हो- गगन थापा
६कोरोना संक्रमण बढेपछि लगाइयो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध
७माथिबाट खसेको ढुङ्गा छल्न खोज्दा भिरबाट लडे प्रहरी हवल्दार, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु
८नेकपा नेता कञ्चनलाई तत्काल रिहा गर्न जनप्रगतिशिल मोर्चा कुवेतको माग, विज्ञप्तिसहित
९बिहे गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाहिरियो विवाहको मिति, को हुन् दुलही ?
१०ओलीलाई २५ लाख बिगाे भराउने फैसला, यति गम्भीर छ कसुर
११दीपक मनाङेलाई वामदेव गौतमले फोन गरेर त्यस्तो के भने ? रहस्य थाहा पाएर ओली-प्रचण्ड समेत चकित
१२काठमाडौँका यी २१ स्थानमा आज बिजुली काटिने, जारी भयो सूचना
कोरोनासंग जुधिरहेको चीनले गरिदियो फेरी अहिलेसम्मकै यस्तो ठुलो घोषणा, विश्वभर खुसियाली
काठमाडौँ । चीनले अब कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ताले बिहीबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिने क्रम मन्द भएपछि यस्तो घोषणा आएको हो ।
चिनियाँ स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै सिन्ह्वाले हालै समाचार तयार पारेको हो । चीनको वुहानबाट सुरु कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय इटाली, कोरिया, जापान, इरान लगायत मुलुकमा फैलन थालेको छ । चीनकै वुहान बाहेक अन्य सहरमा भने संक्रमण फैलन पाएको छैन । यसका लागि चीन सरकारले सुरुदेखि नै उच्च सतर्कता अपनाउँदै आएको थियो ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न बेलायतले केके गर्दैछ ?
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा जोन्सनले बिहीबार आपतकालीन बैठक बोलाएका हुन् । बैठकपछि बेलायतले विद्यालय, फुटबल प्रतियोगिताहरु बन्द गर्नुका साथै सबै मानिसलाई घरमै बस्न अनुरोध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डेलीमेलका अनुसार बेलायतमा अस्पतालहरुले आपतकालीनबाहेक हजारौं अपरेशन रोकेका छन् । यस्तै अबको केही साताका लागि तय गरिएको कन्सर्ट, खेलकुदका कार्यक्रम र चाडपर्वहरु पनि सर्न सक्ने वा बन्द कोठाभित्र आयोजना हुन सक्ने बताइएको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै साउदी अरेबिया र भारतले पनि यस्तै योजना अघि सारेका छन् । अमेरिकाले पनि यूरोपको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । बेलायतलाई पनि त्यत्तिकै रोक्न सम्भव छैन भन्ने महसुस भएकाले प्रधानमन्त्रीले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । बेलायती स्वास्थ्यमन्त्रीले भने बुधबार बन्द गराउने सरकारको कुनै पनि योजना नरहेको बताएका थिए । उनकाअनुसार संसद्सम्म पनि बन्द नगराउने पक्षमा सरकार छ ।